Abaququzeleli bokuLibala iCarnival eJamaica ngo-Epreli 2021
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ukwaphula Iindaba zeJamaica » Abaququzeleli bokuLibala iCarnival eJamaica ngo-Epreli 2021
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula Iindaba zeJamaica • Caribbean • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Umphathiswa Wezokhenketho, Mhlonishwa. U-Edmund Bartlett ubhengeze ukuba ngenxa yemiceli mngeni ebangelwe sisibetho se-COVID-19, abaququzeleli beCarnival eJamaica baya kuyishiya imikhosi yonyaka kunye nezinto ezinxulumene noko ngo-Epreli 2021, kude kube kukwaziswa.
IJamaica ibhengeze ukuba ayizukubamba iCarnival ngo-Epreli walo nyaka.
Isizwe siyaqhubeka nokubona ukwanda kwamatyala ngenxa yobhubhane we-COVID-19 ngaphandle kokukhutshwa okuqhubekayo kwezitofu zokugonya.
Umphathiswa wezokhenketho u-Bartlett uthe yeyona nto ibalulekileyo ebantwini beli ukunceda kwidabi likarhulumente lokugcina ubomi kunye nokuphila.
“Emva kothethathethwano nabachaphazelekayo abachaphazelekayo, ngoku singazisa ukuba iJamaica ayizukubamba iCarnival eJamaica ngo-Epreli walo nyaka. Sikholelwa kakhulu ekubeni yeyona nto ibaluleke kakhulu kubantu bethu kwaye izakunceda kwidabi likaRhulumente lokugcina ubomi kunye nendlela yokuphila, njengoko siqhubeka nokubona ukwanda kwamatyala ngenxa yesifo sika-COVID-19, ”utshilo uMphathiswa uBartlett.
“Siyayikhumbula into yokuphulukana noqoqosho kweli lizwe lethu, njengoko lo msitho uvelisa amawaka ezigidi ngonyaka, kunye namashishini amancinci naphakathi axhamlayo kule mibhiyozo. Nangona kunjalo, ngaphandle kokukhutshwa kwezitofu okuqhubekayo, uRhulumente Jameyikha kufuneka siqhubeke sibeka amanyathelo aqinileyo ukuthintela ukuvezwa ngokungeyomfuneko kwabantu bethu kunye nabatyeleli, kwisifo esiyingozi, ”utshilo.
Umcebisi oMkhulu kunye neQhinga, u-Delano Seiveright wongeze wathi "Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho belikwingxoxo eqhubayo nabaququzeleli beCarnival malunga nokwazisa imbono yamaqamza eCarnival eJamaica 2021, kwiingxoxo ezibanzi zikaRhulumente zokuvula icandelo lezeminyhadala, ngokukhawuleza kukhuselekile ukwenza njalo. ”
U-Seiveright uqaphele ukuba: "Umgaqo wendlela waqala ukumiswa ngo-2020, ngenxa yesoyikiso sokusasazeka kwenoveli ye-coronavirus, ngeCawe, umhla we-11 ku-Epreli 2021 wabhengezwa njengomhla omtsha. Isigqibo sokubamba lo msitho ngo-Epreli walo nyaka senziwe emva kwengxoxo nabaququzeleli bemisitho kunye namagosa kaRhulumente kwaye sihambisana nemigaqo ekhoyo ye-COVID-19. ”
Abaququzeleli babonakalisile ukuba onke amaqela kunye neentsana ziya kuwonga onke amatikiti kunye nezinxibo ezithengiweyo ngo-2020 kwinqanaba elilandelayo.